﻿ ​​सामाजिक न्याय, विकास र सम्बृद्धिका लागि वाम गठबन्धनलाई भोट : सचिव भट्टराई (भिडियोसहित)
​​सामाजिक न्याय, विकास र सम्बृद्धिका लागि वाम गठबन्धनलाई भोट : सचिव भट्टराई (भिडियोसहित)
​नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई केही दिनयता पूर्वका विभिन्न जिल्ला भ्रमणमा छन् । दोस्रो चरणको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका विभिन्न सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा इटहरी आएका सचिव भट्टराईसँग चुनाव र एमालेको भावी कार्यदिशाको सम्बन्धमा हिमाल दाहालले गरेको कुराकानी :
पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दोश्रो चरणको पनि केहिदिनमा हुँदैछ । कस्तो परिणामको अपेक्षा गर्नु भएको छ ।
पहिलो चरणमा ३२ वटा जिल्लाका ३७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव सम्पन्न भएको छ । अहिलेको चुनाव विगतको चुनाव भन्दा अलिकति फरक छ । अहिले हामीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा एउटा वाम प्रगतिशिल र देशभक्त शक्तिहरुको मोर्चा बनाएका छौँ । नेपाली काँग्रेसले अर्को मोर्चा बनाएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको राजनीति अब दुई विचारमा विभाजित हुँदैछ ।
समाजवादी विचारमा आस्था राख्ने बामपन्थि, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी र अग्रगामि सोचाइ भएका जनपक्षिय शक्तिहरुको एउटा पोल खडा भएको छ । त्यसको अगुवाइ हामीले गरेका छौँ । अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा यथास्थितिवादीहरुको पश्चगामी शक्ति छ । जसले पुँजीवादी विचार र उदार बजारवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्छ ।
नेपाली जनता मूलतः मध्यम वर्गिय अवस्थामा छन् । तल्लो वर्गका मानिसहरु पनि धेरै छन् र केहि हदसम्म राष्ट्रिय पूँजिपतिहरु पनि छन् । उनिहरुका प्रतिनिधि मुलभुत हिसाबले कम्युनिष्ट बामपन्थिहरु हुन् । त्यसो हुँदा अहिले देशभरिनै बाम प्रगतिशिलहरुको पक्षमा लहर आएको छ ।
मैले विभिन्न अनुुमानहरु, पोलहरु र पूर्वानुमानहरु सुनेको छु । ३७ वटा पहिलो चरणका सिटहरुमध्ये वाम प्रगतिशिल मोर्चाले करिब ३० वटा सिट जित्दै छ, यो भन्दा बढी पनि जित्दै छ । हामीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सहज ढंगले दुई तिहाई बहुमत आउन सक्छ । हामी त्यो दिशामा जाँदैछौँ र दोस्रो चरणमा पनि त्यस्तो सम्भावना हामीले देखिरहेका छौँ ।
तर स्थानीय तहको चुनावमा पनि यहाँहरुले त्यसै भन्नुभयो तर सोचेजस्तो परिणाम आएन । यसपाली पनि त्यस्तै हुने हो की ?
गणित तपाईहरुले राम्ररी हेर्नुहोला । गणितमा के छ भने स्थानीय तह मध्ये नेकपा एमालेले प्रमुख जितेको २९६ वटा हो । अरु ५० वटा उपप्रमुख ज्यादा जितेको छ । उपप्रमुखको हेर्ने हो भने झण्डै ५० प्रतिशत ज्यादा जितेका छौँ । प्रमुख हेर्ने हो भने हामी त्यस्तै ४५\_४६ प्रतिशत जितेका छौँ । त्यो झण्डै बहुमतको नजिक हो । नेकपा माओवदी केन्द्रले एक सय १० वटा सिट जितेको छ । एमाले र माओवादीको सिट जोड्दा चार सय भन्दा बढी स्थानीय तह हामीसँग छन् र त्यो ५५ प्रतिशत भन्दा पनि ज्यादा हो । त्यसको मतलब बहुमत स्थानीय तह हाम्र दुईटा पार्टीको हातमा छ । जुन एक्ला–एक्लै लडेर जितेका हौं । तर आज हामी मोर्चाबन्दी गरेर लड्दैछौं ।
साथै कतिपय ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गाई चिन्हवाला हामिसँग छन् । कतिपय ठाउँमा राष्ट्रिय जनमोर्चा मोर्चाबन्दीमा छ । नेमकिपा हामीसँग मोर्चाबन्दीमा छ । कतिपय ठाउँमा तराईका शक्तिहरु र व्यक्तिहरु पनि हामीसँग मोर्चाबन्दिमा छन् । अब ती सबैले स्थानीय तह जितेको सिट संख्या जोड्ने हो भने झण्डै ६० प्रतिशत स्थानीय तह त अहिले नै हामीसँग छ ।
दुर्भाग्यवश स्थानीय तहको चुनाव अगाडी हामीले मोर्चा बनाउन सकेनौँ । अहिले एमाले र माओवादीको मोर्चाले देशभरी उत्साह ल्याएको छ । जागरण ल्याएको छ र अब यो चुनावमा हामी सहज ढंगले दुई तिहाईको नतिजा निकाल्न सक्छौँ । यो कुनै हावादारी परिकल्पना होईन गणितले नै त्यहि देखाउँछ । हामी ६० प्रतिशत भन्दा ज्यादा मत ल्याउँछौँ र त्यसले दुई तिहाई सिट जित्न सक्ने क्षमाता राख्छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा अलिकति एमाले भित्रकै गुटले पनि असर गरेको देखियो । यो चुनावमा पनि त्यो किसिमको गुटले असर गर्ने र अन्तरघात हुने केहि केहि सूचना आएका छन् ?
पार्टीभित्र अलिअलि असन्तुष्टि हुन्छन् । त्यसलाई हामीले त्यति ठूलो विषयवस्तु पनि बनाएका छैनौं । देश आज बाम प्रगतिशिलहरुको पक्षमा मोडिंदै गएको छ । बाम प्रगतिशिलमय बन्दै गएको छ । यस्तो बेलामा एमाले अथवा माओवादीका मानिसहरु कोहि झिनो मसिनो स्वार्थले यो अभियानबाट टाढा बस्न सक्दैनन् । यदी कसैले सोचेका छन् भने तिनको निम्ति यो दुर्भाग्य हुन्छ । तिनिहरुले इतिहासको प्रवाहलाई बुझ्न नसकेको ठानिनेछ । र उनिहरुले भोलिका दिनमा पार्टीका तर्फबाट पाउने कुनैपनि अवसरहरु पाउँदैनन् । र उनिहरु अलग्गिनु बाहेक कुनैपनि विकल्प हुने छैन ।
यसकारण म भन्न चाहान्छु, हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला भएका भुलचुकहरुलाई सच्याउन, त्यसबेला भएका गल्तिहरुलाई माफि मिन्हा गर्ने एउटा राम्रो मौका यो निर्वाचन हो । त्यसैले सुनसरीका एमाले माओवादीका सम्पुर्ण मतदाताहरु कार्यकर्ताहरु तथा झापा मोरङका सबैलाई म पार्टीका तर्फबाट अपिल गर्छु, सहि ठाउँमा उभिनुहोस्, सहि निर्णय गर्नुहोस् पार्टीले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न दृढकासाथ अगडि बढ्नुहोस्, अन्यथा कुनैपनि विकल्पहरु तपाईसामु छैनन् । एकदमै स्पस्टसँग हाम्रा कार्यकर्ताहरुलाई भन्न चाहान्छु ।
गठबन्धनकै आधारमा दुई तिहाई आउँछ भनेर यहाँहरु ढुक्क हुनुहुन्छ । तर एमालेले माओवादीलाई र माओवादी समर्थकले एमालेलाई भोट दिनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? त्यो दिनमा जुन तितक्ता थियो, मेटियो त कार्यकर्तामाझ ?
हामीले जतिबेला चुनावको मोर्चा बनाएका थियौँ त्यतिबेला हामीलाई पनि यहि आशंका थियो । तर म आफैं ताप्लेजुङमा चुनाव लडेर आइसकेको छु । जहाँ पार्टी एकीकरणप्रति एकदमै उत्साह देखियो । हामी महिनौं दिनसम्म सँगै हिंडेका छौं, सँगै खाएका छौं, सँगै सुतेका छौं, एक अर्कालाई परिपूरक सम्झेर हेरेका छौं । हाम्रा प्रचारका झण्डामा दुई वटा चिन्ह एउटै कपडामा छन् । आज तराई–मधेस र पहाडका हरेक घर–घरमा हसिया हतौडा र सूर्यको चिन्ह एउटै झण्डामा अंकित छ । हरेक मञ्चमा, अभियानमा हामी सँगै छौं । यो चुनावको लागि मात्रै तालमेल होइन । हामीले चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने घोषणा नै गरिसक्यौं । ५ जना एमालेका नेताहरु र ३ जना माओवादीका नेताहरु रहेको केन्द्रिय संयोजन समिति नै बनिसकेको छ । अब निर्वाचन पछि लगत्तै हामी संयुक्त अवधारणा पत्र बनाउँछौ । तलदेखि कमिटि मर्ज गर्दै जानेछौं र आउने एक वर्ष भित्र हामी एकीकृत संयुक्त माहाधिवेसन आयोजना गर्नेछौं । यो प्रवाहबाट अलग कोहि पनि रहन सक्दैन सबै इमान्दिारिताका साथ यो गठबन्धनका पक्षमा भोट हाल्छन् । त्यसमा मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
मन्त्री बन्ने, मन्त्रालय भाग लगाउने विषयमा झगडा भएर गठबन्धन नहूने भयो, एकता नहुने भयो भन्ने सुन्न पर्दैन त ?
देश बनाउँदै छौं हामी, देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा छौं । देशको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउँदैछौं ।
जब देश धनि हुन्छ, गरिब मान्छेहरु पनि जो खान पाएका छैनन्, लाउन पाएका छैनन् उनीहरुको जिन्दगीमा पनि एउटा खुसियाली आउँछ । जब राष्ट्र बलियो हुन्छ, सरकार बलियो हुन्छ, त्यतिबेला एउटा मन्त्रालय मैले नपाएर के हुन्छ । मैले मन्त्रालय नपाएर अर्कोले मन्त्रालय नपाएर के हुन्छ ? त्यसको केहि अर्थ नै हुँदैन । त्यसको केहि मुल्य नै हुँदैन । देश बन्छ भने हरेक मान्छे बन्छ । व्यपारी बन्छ, उद्योगी बन्छ । काम नपाएर विदेश गएका मनिसहरु फर्किन थाल्छन् ।
हामी यहीं कामका अवसरहरु सिर्जना गर्छौं, ठुलठुला उद्योग धन्दा खोल्छौं, व्यापार व्यवसाय चलाउँछौ, पर्यटनको विकास गर्छौं, कृषिको आधुनिकिकरण गर्छौं, औद्योगिकरण गर्छौ, पूँजिको विकास गर्छौं, २–४ वटा मन्त्रालय कसले पाए, कसले पाएनन् भन्ने कुरा सबै झिना मसिना कुरा हुन्छन् । हामी त यहाँ ठूला–ठूला उद्योगका मालिक बन्दैछौं नी । जुन कुनै मन्त्री पद भन्दा पनि आकर्षक हुनेछ ।
बाम गठबन्धनले चुनावमा दुई तिहाइ ल्यायो रे । त्यस सरकारको पहिलो निर्णय के हुन्छ ?
हामी संविधान कार्यान्वयनको एकदमै महत्वपूर्ण फेजमा छौं । र हामी शताब्दी लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गर्दैछौं । हामी एउटा बलियो तथा स्थिर सरकार बनाउँदैछौं । कुनैपनि नेपालीले म कमजोर देशको नागरिक हो भन्ने हिनताबोध गर्नुपर्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्दैछौं । अनि भारत र चिनसँग सम्मानजनक सम्बन्ध स्थापना गर्दैछौं । अरु मुलुकहरुसँग पनि सम्मानजनक सम्बन्ध स्थापना गर्छौं । पासर्पोट बोकेर विभिन्न देश घुम्न गएका नेपालीले म सानो देशबाट आएको भनेर हिनताबोध र्गुपर्ने कुरालाई हामी अन्त्य गर्छौं ।
नेकपा एमालेलाई भोट दिनुपर्ने कारणहरु के के हुन ?
हामीले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकार बनायौँ । त्यसबेलासम्म राज्य भनेको जनताको होइन, जनतालाई दमन गर्न बनाइएको संयन्त्र हो भन्ने मान्छेको बुझाई थियो । तर मनमोहन अधिकारीको पालामा आइसकेपछि हामीले राज्य भनेको जनताको साथी हो, जनताको मित्र हो, जनतालाई सुख–दुःखमा साथदिने संस्था हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझायौँ ।
आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ अभियान चलाएर तराई मधेस र पहाडका गाउँ–गाउँसम्म बाटो पुर्याउने र जनजीवनमा सहजता ल्याउने काम हामीले गर्यौं। जेष्ठ नागरिक भत्ताको प्रबन्ध पनि मिलायौं । जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यय मधेसी समुदायलाई हरेक निकायमा सम्मान जनक उपस्थितिको परिस्थिति हामीले बनायौं ।
ठुल ठुला पूर्वाधारको विकासमा पनि हामीले केहि काम गर्यौं । हामीले सुरु गरेका अपर तामाकोशी जस्ता चार सय भन्दा बढी परियोजनाहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । हाइड्रोपावर परियोजना हामीले नै सुरु गरेका हौं । उत्तर दक्षिण लोकमार्ग तथा तिब्बतदेखि भारतसम्म व्यपारिक मार्गहरु खोल्नुपर्छ भनेर नौ वटा कन्सेप्ट अगाडी बढाएका छौं । राष्ट्रिय विमानस्थलको विचार अगाडी बढाएका छौं । भैरहवा, पोखरा जस्ता ठाउँमा यो निर्माणाधिन अवस्थामा छ । शिक्षामा, स्वस्थ्यमा धेरै कुरामा हामलिे सुधार गर्दै अएका छौं । तर पर्याप्त भने छैन । त्यो काम पुरा हुन नपाउँदै हाम्रो सरकार बदलिने स्थिती हुँदै आयो ।
अब यिनै कामहरुलाई निरन्तरता दिँदै ५ बर्षमा पूर्वाधारको विकास गरी अउने दश वर्षमा सम्पुर्ण दक्षिण एसियाकि मुलुकहरुको दाँजोमा पुर्याउने र आउने २५ वर्षमा विश्वका धनि मुलुकहरुको दाँजोमा पुर्याउने लक्ष्य हाम्रो छ । यो लक्ष्यमा अगाडी बढ्दै जाँदा देश भित्रका आर्थिक असमानताहरु, जातिय असमानताहरु, भौगोलिक असमानता जस्ता समस्यालाई हल गर्दै नेपाली समाजलाई समतामुलक र एउटा सामाजिक न्यायमा आधारित समाज बनाउने छौं । सामाजिक न्याय, देश विकास र नेपाली जनताको सम्बृद्धिका लागि अब वाम गठबन्धनलाई जिताउनुको विकल्प छैन ।